Shina Stainless vy tariby tariby vita amin'ny orinasa sy mpamatsy | Gepair mesh
Vy vita amin'ny vy tariby vita amin'ny vy
Stainless vy tariby Rod Woven Mesh dia vita amin'ny bara na vy tariby.Itambatra amin'ny marika maro isan-karazany ny barika metaly transverse mamakivaky ny tariby vy matevina. Ireo fitaovana ampiasaina dia misy vy stainless vy ary vy mahery vaika vita amin'ny vy chromium.
Ny fanadin-tariby an-tariby dia singa tsy manam-paharoa ho an'ny haingon-trano maritrano, satria mora tarehy ny mason-tsofina vy. Namboarina tamin'ny asa tanana manokana, manana fahaiza-miaina tsy manam-paharoa sy famaingoana tsipika metaly izy ary ankasitrahan'ny tranombakoka, efitrano fampiratiana lehibe, ary indostrian'ny haingon-trano hafa.
Pildika tariby: 0.5--80.0mm.
Fitsaboana atody: Loko metaly tany am-boalohany, volamena volafotsy, volafotsy.
Ny mpanjifa 85% no mifantina ny lokan'ny Metal Original,
Ny mpanjifa 15% mifidy ny hafa.
Stainless steel tariby Rod Woven Mesh Application
Ny bara vita amin'ny tariby izay matetika dia ampiasaina amin'ny fananganana havoana, mpizara, am-bavony, balconies ary corridors, shutter, staircases ary seranam-piaramanidina miditra amin'ny seranam-piaramanidina, hotely, kafe, tranom-bakoka, trano opera, efitrano fampisehoana, biraon'ny birao, biraon'ny fampirantiana, efitrano fampirantiana, paritition, mall ary toerana hafa.
Ahoana ny fomba hanaovana fanadihadihana tariby tariby Rod Woven Mesh?
Ianao dia mila manome fitaovana, tariby tariby, vata tariby, sakan'ny sela, rod pitch, ary ny habetsaky ny mangataka tolotra, azonao atao koa ny manambara raha manana fepetra manokana ianao. Hanome lisitra fakan-tsoratra amin'ny fomba ofisialy aorian'ny nahazoana ny fanontanianao
2. Afaka manome ohatra ve ianao? Hafiriana no tokony hiomanana?
Eny, afaka manome santionany isika .Ny fotoana famokarana dia 5 ~ 7 andro.
3. Azonao atao ve ny milaza ahy ny fomba fametrahana ny cable Rod Woven Mesh?
Eny, manana injeniera matihanina izahay hanampy anao amin'ny fametrahana ny cable Rod Woven Mesh. Ary afaka hamaha ny olana rehetra anananao amin'ny fametrahana.
4. Afaka manome serivisy voatokana ho anao ve ianao?
Vitantsika izany. Afaka mamokatra araka ny filanao ianao, ary afaka manome anao vokatra lafo vidy ho anao.
Manaraka: Solika vy coil